Amisom “Ciidamo ayaan ku weynay Dagaaladii ugu danbeeyay” – SBC
Amisom “Ciidamo ayaan ku weynay Dagaaladii ugu danbeeyay”
Posted by Webmaster on Aktoober 21, 2011 Comments
Afhayeenka Ciidamada Midowga Afrika Col. Paddy Ankunda ayaa waxaa uu sheegay in dagaaladii ugu danbeeyay ee Ciidamadooda ay la galeen xarkada alshabaab ay ku dhinteen askar ku dhow 10 askari isaga oo sidoo kale xusay in weli la layahay laba ka mid ah ciidamadooda kuwaasi oo dagaalka intii uu socday lagu waayay.
Afhayeenka Ciidamada amisom oo saxaafada la hadlay manta oo jimce ah ayaa waxaa uu meesha ka saaray oo beeniyay in ciidamada ay Xarkada shabaab ku so bandhigeen Muqdisho ay ka mid yihiin kuwaada.
Ciidamada amisom saraakiishooda ayaa sidoo kale xusay in Dagaalada ugu danbeeyay ee Muqdishi ka dhacay gaar ahaan fariisinkii ugu badanbeeyay ee ay muqdisho ka daganaayeen Alshabaab looga gubay mid ka mid ah gadiidka dagaalka oo ay lahayeen Ciidamada Amisom.
Hadalka Saraakiisha amisom ee khasaaraha dagaalka waxaa uu ku soo aadaya xilli dagaalka ka dib ay alshabaab duleedka muqdisho ku oo bandhigeen Meydadka in ka badan 70 qof oo ay ku tilmaameen inay ka dileen ciidamada ajanabiga ee Amisom.
Meydadka Xarakada ay soo bandhigeen ayaa waxaa ay ku lebisnayeen Dareyska Ciidamada Amisom lagu yaqaan Gaar ahaan koofiyadaha Xabada Celiya iyo sidoo kale jaadaha lagu yaqaano ciidamada Amisom.
Docda kale Afhayeenka Ciidamada Amismo waxaa uu sheegay in Meydadka ay alshabaab soo bandhigeen ay yihiin kuwo loo xiray Dareykooda mid u eg ayna tahay Been la dhoodhoobay warka Afhayeenka Alshabaab Cali dheere uu ku sheegay inay ka dileen Ciidamadan Amisom
Wararka ugu danbeeyay ee Xilligan laga helayo goobihii lagu dagaalamay ayaa muujinaya Deganaasho kooban wallow laga cabsi qabo Dagaalo markale halkaasi ka qarka oo dhexmara Amisom iyo Alshabaab